Wasiir Jamaal oo socdaalkiisa soo gaba gabeeyay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasiir Jamaal oo socdaalkiisa soo gaba gabeeyay
Wasiir Jamaal oo socdaalkiisa soo gaba gabeeyay
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta Maalgashiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa maanta soo gabagabeeyey booqasho Afar maalin qaadatay oo uu ku marayey qeybo ka mid ah Degaanada Gobolada Sool iyo Sanaag.
Booqashadiisa ayuu ku soo gaba-gabeeyey degmadda dhahar, halkaasi oo uu kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshadda oo ku soo dhoweeyay duleedka Magaalada, Wasiirka ayaana warbixino ka hadlaya baahiyaha iyo nabad geliyada ka dhagaystay dadka degaanka.
Wasiirka Qorshaynta iyo Horumarinta Maalgashiga Dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo lahadlayey bulshaddii degmadda dhahar ku soo dhoweysay ayaa waxa uu u shegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya uu u gudbin doono natiijada socdalkiisa.
Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay u kuur galayaan xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin dadka ku nool degaano iyo Tuulooyin ka tirsan Sool iyo Sanaag, amniga iyo hormarka ka jira.
Wasiirka oo socdaalkiisa soo gaba gabeeyey, ayaa kormeeray garoonka diyaaraddaha Magaalada Garoowe oo dhismihiisu gaba gabo yahay, waxaana uu kula kulmay Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo hadda ah Senatar ka tirsan Aqalka sare ee Soomaaliya.